Ọ dịghị, Greta bụghị àmà na-egosi | Apg29
Ọ dịghị, Greta bụghị àmà na-egosi
M na-a na-agụ email e zigara m ebe onye dere ihe ebube ma 16-afọ gburugburu ebe obibi mmume Greta Thunberg bụ emegide Kraịst.
M na-agụ tupu taa na akwụkwọ akụkọ n'ụbọchị na mmadụ tụnyere ihu igwe ije revival ije. Ma revival mmegharị nweta olileanya, nke ị ga-esi na ihu igwe ije.
M na-a na-agụ email e zigara m ebe onye dere ihe ebube ma 16-afọ gburugburu ebe obibi mmume Greta Thunberg bụ emegide Kraịst. Iji ajụjụ m nwere ike ịza ya ozugbo:
"Ọ dịghị, Greta Thunberg bụghị àmà na-egosi."
Greta bụ a nwaanyị. The Bible na-ekwu na àmà na-egosi bụ nwoke, otú ahụ ntule dara ozugbo. Ọ bụ adịghị agbanwe agbanwe na Bible.
2 Thes 2: 3 . Ka onye ọ bụla duhie unu n'ụzọ ọ bụla. N'ihi na ụbọchị ga-, ma n'efu ama e mere, na nwoke nke mmehie, adiana ke adiana nwa [ie a nwoke], e kpugheere.
Otu ekwesịghị ịkatọ
N'ezie m na-ebipụta dịghị agụ email. E wezụga mejlets ọdịnaya bụ esiteghị n'Akwụkwọ Nsọ, m ga na-lynched. Na ihe ikpeazụ bụ iju. Ọ bụ doro anya na ọ bụghị ịkatọ Greta Thunberg.
M na-agụ na a football nchịkwa onye sịrị nzuzu ya ihe ugbu a na- chụọ n'ọrụ . Chọpụta, ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị asụsụ, ma, ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Na mbụ, m hụrụ a clip si American telivishọn, m kwere ọ bụ, ebe ọ na-katọrọ 16-afọ nwa agbọghọ e ozugbo gwara oyi site na nwoke ọzọ na-eji okwu:
"Gịnị mere i na-akatọ a nwa, ị bụ dimkpa mmadụ?!"
Ọ bụghị naanị na a na nwa, ma, ọ na-nwere atọ diagnoses, nke m na mbụ na-agụ na Wikipedia , ma ugbu a ọ dị na-ekwu na o nwere a "oké ịda mbà n'obi ma nwee ahụmahụ mmetụta nke ịbụ ihe efu," ma ya 2018 kpebiri "iji kama ịlaghachi ịda mbà n'obi, na-aga n'ime ihe. "
Ọ bụrụ na ị na-akatọ Greta nwere ike ebubo na akatọ a na-arịa ọrịa na nwa. N'ụzọ dị otú a ọ kwụsịrị ụdị nile nke nnyocha megide ije gburugburu Greta Thunberg.
N'ezie ọ bụghị ọ onye meere na ọ aghọwo otú a maara nke ọma, ma ọ bụ bokomliggande agha na ụba na ọdịmma.
M na-adịghị akatọ Greta, ọ bụ a na nwa - na a dị oké ọnụ ahịa mmadụ - na-mkpa Jesus Christ. Ihe m na-emetụta merụsịrị site akpata ọdịmma na agha. The oge mbụ m hụrụ Greta Thunberg, m bụ ozugbo na-ewe iwe.
Mgbe ahụ Greta anaghị nnọọ nnukwu ma m meghachi omume otú ahụ. Ọ bụ ihe ijuanya na ihe niile media bụ n'azụ, na-dakọtara ruo ya. Na n'ihi na ihe mere ka onye ọ bụla na-aghọta na e nwere ihe amiss.
Ọbụna m 13 afọ nwa, onye bụ Greta na Instagram , chere ya UN okwu bụ adịgboroja , na ọ gwara m nnọọ spontaneously m tupu m nwere oge ikwu ihe ọ bụla.
Ya mere, ndị na-akpata Greta Thunberg bụ smart mgbe ha zitere ya n'ihi na ị dị nnọọ ike na-akatọ a na-arịa ọrịa na nwa!
Na na ọ bụ n'elu ihe niile iji nweta na Nobel Peace Nrite kwesịrị, ọtụtụ na-aghọta na ọ bụ adịgboroja. Na mbụ osote onyeisi oche na ihu igwe mmume Al Gore, natara award maka a akwụkwọ, o mere. M na-agụ na amụma ya film bụ ụgha na ha agaghị emezu .
Na ọnọdụ dị otú a ị na-ekwu na ị naanị afọ iri nke ịzọpụta planet. Otu kwuru Greta na ụmụaka ndị ọzọ ya na mbụ kwuru na otu ihe ahụ. Na na ọ bụ maka banyere 20 - afọ 30 gara aga !
Earth ga-aga n'okpuru
Earth ga-aga karịrị afọ iri na - bụghị 20 ma ọ bụ afọ 30. Ya mere ndi-amuma nile nke Rome na-abịa na ndị dị otú ahụ ozi na-adịgboroja. Akpa, Jesus ga-alaghachi, ọ ga-alaghachi Jerusalem n'ụwa a!
Ọ bụrụ na ala na-arahụ n'okpuru, mgbe ahụ, Jesus dịghị ala laghachi. Ya mere, anyị na-aghọta na nke a ụdị doomsday amụma ụgha.
Ma mgbe Jizọs buru eze na ụwa ruo otu puku afọ mgbe ya laghachiri, mgbe ahụ, ọ ga-abụ a eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ! Ma a ga-enweghị mbibi - ọ ga-abụ a Olee banyere anyị taa.
Onye ọbụna dere Church magazine ka Greta Thunberg bụ a amụma . Ọ dịghị, ọ bụghị onye amụma. Ọ bụrụ na ọ ka ga-a amụma - Mgbe ahụ ọ bụ ụgha otu. A amụma na-ebu amụma nke olileanya na Jizọs Kraịst na-adịghị dị otú ahụ a ozi dị ka Greta Gì ndị na-enweghị olileanya na nzọpụta.
The Bible kwuru, sị:
Ilu 23:18: N'ezie ị dị ka a ga-eme n'ọdịnihu, na olileanya unu agaghi-la n'iyì.
Jeremiah 29: 1: M maara na atụmatụ m nwere maka unu, ka Jehova kwuru, 'echiche udo, ọ bụghị nke ihe ọjọọ, inye unu ọdịnihu na olileanya.
Ilu 24:14: N'ihi ya, bụ ihe ọmụma na amamihe mkpụrụ obi gị. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ha, ị ga-eme n'ọdịnihu, na olileanya unu agaghi-la n'iyì.
Jeremiah 31: 1: E nwere olileanya maka ọdịnihu gị, ka Jehova siri. Gị na ụmụ gị ga-alaghachi n'ala ha.
M na-agụ tupu taa na akwụkwọ akụkọ n'ụbọchị na mmadụ tụnyere ihu igwe ije revival ije . Ma na Christian revival mmegharị nwere Jesus ke n'etiti inweta olileanya, nke ị ga-esi na ihu igwe ije.
Ma ihu igwe ije aghọwo a okpukpe. M hụrụ a video on YouTube bụ: " Green Revival | The ọhụrụ ihu igwe okpukpe ". Lars Bern Swebb telivishọn oku ọbụna Greta Thunberg si ihu igwe ngagharị maka a doomsday òtù nzuzo . Na ịrọ òtù, anyị maara na ndị mmadụ na-agbụ na-emegbu emegbu, ma na Jizọs Kraịst, ndị mmadụ na-setịpụrụ free.
Ọ bụrụ na anyị na-aga azụ ka a mmalite isiokwu a, n'ezie, ọ bụghị Greta Thunberg àmà na-egosi. E nwere, na-agụ ozi ịntanetị ebi ukwuu. Na email Ọ na-abọli dị ka ruo Greta aha ikpeazụ bụ 666 na na na agba bụ dị ka islam green.
Ma na aka nke ọzọ nwere ike na gburugburu ebe obibi ije ịbụ akụkụ nke egbe nke emegide Kraịst. E nwere ike agha n'azụ zuru ụwa ọnụ na gburugburu ebe obibi ije nwere ike ime nke na-abịa àmà na-egosi bụ n'ocheeze ahụ. Air ije bụ kpamkpam ọcha. N'ihe a niile, ndị mmadụ nwere ike ịdị na-emegbu ma na-pawns na a anaghị atụkwasị ibe egwuregwu.
Distortion nke Order pụtara
M ga-kwuru banyere otú e si enye okwu a dị iche iche pụtara. Mgbe ụfọdụ, m na-agụ na Greta "mmụta iku" mgbe e nwere kemgbe a ajụjụ nke akwụkwọ iku. N'ihi na olee otú ọ tie akwụkwọ ná mba ọzọ, dị ka United States?
Ma ọ bụ na-akpọ ya "iku" ma ọ bụ "ihu igwe iku". Ọ bụghị a ajụjụ nke a ole na ole etiwapụ, ma demonstrations na mgbasa echiche. Ị ga-akpọ ihe maka ihe ọ bụ. Ma otú a, ha kụrụ echiche na echiche uche ndị mmadụ na-emetụta ha na a ụfọdụ direction.
Jụọ Greta Thunberg na-ekpe ekpere maka ndị ọzọ niile bụ ndị na-enweghị olileanya. Kpee ekpere ka ozioma na ndị ọzọ na-ejere Jehova ga-ezite ha ka ha na-anụ dị ebube ozi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke mere na ha na-anabata ya ma na-azọpụta!
Matiu 9:38 . Ya mere ekpe ekpere Chineke ka o ziga ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi ya.
M na-agụ ebe ahụ a Christian nnọchiteanya, m kwere na ọ bụ onye nchụàjà, kwuru na ihe kasị mkpa anyị nwere taa bụ ihu igwe ma ọ bụ na gburugburu ebe obibi. Ọ dịghị, ọ bụghị ihe na-ese. Isi nke bụ na ndị mmadụ mkpa ịnakwere Jizọs na-azọpụta.
V 09, måndag 1 mars 2021 kl 02:12